Alarobia 15, 2007 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Nick Halstead sy ny ekipa dia nanomboka Fav.or.it, rafi-pamakiana fahana mifototra amin'ny vondrom-piarahamonina manan-karena. Ity misy horonantsary fohy manazava ny haitao sy ny antony maha-fandrosoana mahafinaritra ny mahita sy mifanakalo hevitra momba ny atiny lehibe:
Ny kely jereko, ny zavatra tsara kokoa azo!
17 Aogositra 2007 amin'ny 2:01 PM
Izy io dia manana interface tsara sy anarana domain mahaliana, saingy be dia be ny tranonkala simialr manandrana miditra amin'ireo karazana tsena ireo ankehitriny. Ireo zazalahy lehibe dia efa nametraka ny fitakiany ary ho sarotra ny hampihozongozona azy ireo.
Ary mazava ho azy, tsy maintsy hiditra amin'ny ady amin'ny spam izy ireo toy ny tranokala usch toa an'i Digg.